Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – एक हातमा राजीनामा, अर्को हातमा गोजीनामा
एक हातमा राजीनामा, अर्को हातमा गोजीनामा
Sep 17, 2015 DT Admin Political Opinions, Top News Comments Off on एक हातमा राजीनामा, अर्को हातमा गोजीनामा
by मनोज बोगटी
पहाड़का दलहरूलाई कतिखेर गोर्खाल्याण्डको याद आउँछ ?
उत्तर हो, लोकसभा र विधानसभा चुनाउको बेला ।
फेरि गोर्खाल्याण्डको सिजन आयो । केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्र होइन आफूलाई विपक्ष भन्दै अस्तित्व जोगाइरहेको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले समेत गोर्खाल्याण्ड भन्न थाल्यो । मानौँ, गोर्खाल्याण्ड शब्द विपक्षलाई दलको अस्तित्व बचाइराख्ने सञ्जीवनी बुट्टी हो अनि मोर्चालाई जीटीए जोगाउने सुरक्षा कवच ।
यो प्रश्नको उत्तर अचेल सबैले दिन सक्छन्‌ । उत्तर हो, लोकसभा र विधानसभा चुनाउको बेला ।
दुइटै चुनाउअघि मोर्चा विकासमा व्यस्त अनि विपक्ष झोड़ा नाला, पानी राशिनको मुद्दामा । चुनाउ आउन एक वर्षअघिदेखि दार्जीलिङका दलहरू गोर्खाल्याण्डको देउसुरे भट्याउन थाल्छन्‌ । त्यो मौसम सुरु भयो ।
लुते विपक्षको ठूलो स्वर
तीनवटा महकुमाभित्र दलीय अस्तित्व कायम राखेका विपक्ष सबै लुते छन्‌ । दलको नामअघि ‘मार्क्सवादी’ टॉंसेका तर राजनीतिक बौद्धिकता सुकेको दल क्रामाकपा “हाम्रो दल ‘मासबेस’ होइन” भन्छ । मुद्दाचाहिँ मासको बोक्छ । ‘क्याडरबेस’ भनिने यो दलको असफलता ‘लुते’ कार्यक्रम नै हो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड भन्नु थाल्यो भने यस दलले पनि त्यही भन्छ । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ‘छैटौँ अनुसूची’ भन्यो भने भोलिपल्टै पत्रपत्रिकामा यसको विरोध गर्छ । जीटीएको समीक्षा गर्छ, अन्य दलहरूको नियतमाथि आलोचना गर्छ । विपक्षले बोल्नुपर्ने सप्पै गर्छ । तर गोर्खाल्याण्डको निम्ति आफै चाहिँ केही गर्दैन ।
अर्को दल छ, गोर्खालिग । मदन तामाङको हत्याकाण्डपछि शोकमा डुबेको डुबेकै छ । न समर्थक छ, न नेता नै । जति छन्‌, नाकमा रिस बोकेका अनि विचारमा रित्ता ।
गोरामुमो छ, छैटौँ अनुसूची बौरिने आशामा पानी छम्किबस्छ । अझसम्मै ती नै नेताहरू छन्‌, जो डेट एक्सपायर हुन्‌ । उनीहरूको भाषण सुन्दा लाग्छ, अस्सीको दशकको ह्याङओभर सकिएको छैन । तृणमूल कङ्‌ग्रेस छ, जीटीए ढुकिबस्छ । ‘एउटै पनि धॉंधली हुन दिनेछैनौँ’, भनिबस्छ । आँखैसामुको नाक देख्दैनन्‌ । अथवा उनीहरू भ्रष्टाचार र धॉंधली देख्दैनन्‌ ।
अरू दलहरू पनि छन्‌, जो राज्य र केन्द्रको ‘ब्लेसिङ’-पर्खेर बसिरहेका छन्‌ । कुनै दल चुनाउमा निस्किएका च्याउ छन्‌, कुनै रिटायर्ड लाइफमा टाइमपासे । अराजनीतिक सङ्‌गठनहरू पनि छन्‌, जो बेलाबेला विपक्षकै अनुहारमा आउँछन्‌ । कुरा राष्ट्रियस्तरको, काम ग्रामीणस्तरको । यस्ता रूपमा, आयतनमा, विचारमा, कार्यक्रममा र योजनामा लुते दलहरूलाई बिँड़ी तानेर ठुटा कुल्चीमिल्ची पारेजस्तो गर्न सक्ने एकैजना नेता हुन्‌, विमल गुरूङ । विपक्षको राजनीति विमल गुरूङको वरिपरि घुम्छ । कुल्चिमाग्नु परेकोमा ङ्‌यारर गर्छ । यी दलहरूलाई एकता भनेको ‘इगो’ र ‘प्रेस्टिज’को प्रश्न हो । ससाना शक्तिमा विभाजित यी नै विपक्षको लुते उपस्थितिको कारण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ढलिमलि छ । यस्ता दलहरूको गर्जन ठूला हुन्छन्‌, भुक्ने कुकुरजस्तो । टोक्नचाहिँ सक्दैनन्‌ । भॉंच्चिएको दॉंतजस्तो विचार बोकेर बॉंचिरहेका यी दलहरू दार्जीलिङका जनताको निम्ति यस्तो पिलो हो, जो न फुट्‌छ, न त सुक्छ नै ।
कुनै पनि दलले जीटीए गठन भएयता छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति नयॉं योजना सार्वजनिक गरेनन्‌ । न कुनै खाइलाग्दो कार्यक्रम नै गर्‍यो । न त यस्ता दलहरूलाई दिशा देखाउने एकै पनि यस्ता माइकलाल बौद्धिकले अनुहार देखाए । लेखनमा विचारको अनि चेतनाका कुरा हॉंक्ने साहित्यकारहरू मौन बसे । न त कुनै यस्ता राजनीतिक आलोचक देखापरे, जसले खराब दलीय नियतको छाला काढोस्‌ । न यस्तो समाजको स्वर देखापर्‍यो, जसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई केलाएर हेरेको होस्‌ अनि चुकेका कुराहरू सार्वजनिक गरोस्‌ ।
सबैलाई विमल गुरूङले जति भनेका छन्‌, त्यति मात्र थाहा छ । सबैले विमल गुरूङले जति दिएका छन्‌, त्यतिमात्र थापेका छन्‌ । सबैले विमल गुरूङले जे जे काम बिगारेका छन्‌, त्यतिमात्र देखेका छन्‌ । वास्तवमा पहाड़को आजको अनुहार बनाउनुमा लुते विपक्ष, फोस्रो बौद्धिक र अचेत जनताको बराबर लगानी छ ।
अचम्म त कतिबेला लाग्छ भने, जोसित छुट्टै राज्यको निम्ति कुनै कार्ययोजना छैन, कुनै प्रतिबद्ध सपना छैन, कुनै भरपर्दो र समयानुकूल कार्यक्रम छैन, ऊ नै गोर्खाल्याण्डको देउसुरे खेल्न निस्किएका छन्‌ । यतिखेर यस्ता दलहरूको निम्ति दसैँ सुरू भइसकेको छ ।
शक्ति विभाजक र लबस्तरो चेतना
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका मुखिया विमल गुरूङलाई ‘गोर्खाहरूमा विभाजन ल्याउने राज्य सरकार हो’ भन्ने लागेको रहेछ । तर कसैले विमल गुरूङलाई ‘विभाजक राज्य सरकार होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो’ भनिदिन सक्दैनन्‌ । किनभने कसैले पनि मुद्दा र आन्दोलनको गम्भीरताको हेक्का राखेका छैनन्‌ । कसैले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको बौद्धिकता, दूरदर्शिता र कार्यनीति केलाएका छैनन्‌ । यसो अलिकति अङ्‌ग्रेजी बोल्न सक्ने, यसो अलिकति राम्रो बोल्न सक्नेदेखि लिएर कलेज र स्कुल पढ़ाइरहेका तर राजनीतिको ‘क’ पनि नछिचोलेका अनि गोरामुमोसित झड़प हुँदा जसले ठूलो पाखुरा देखाएका छन्‌, सप्पै मोर्चाका बुद्धिजीवी हुन्‌ । छुट्टै राज्य परिचालनको खेस्रा त के कुरा, राम्रोसित हेडमास्टरलाई चिट्ठीसमेत लेख्न नसक्नेहरूले बनाएको ‘प्राधिकरणको खेस्रा’ नै जाति विभाजक थिएन त ? मोर्चाले आन्दोलन त्याग्दै थियो अनि विकल्पमा जीटीए तयार पार्दै थियो । यतिखेर विभिन्न जातगोष्ठी, जनजाति, अनुसूचित, महिलाहरूको आरक्षणको हिसाबकिताब कसले राखेको थियो ?
छुट्टै राज्यको निम्ति सबैले समर्थन दिइरहेको बेलामा आन्दोलन थन्काएर जीटीए ग्रहण गर्नु वास्तवमा ‘फेरि अर्को दागोपाप ल्याउनु नै हो’ भन्ने बुझेका विभिन्न जातगोष्ठीलाई जीटीएले सम्बोधन गर्न सकेको भए के बोर्ड गठन गर्ने स्पेस राज्य सरकारले प्राप्त गर्थ्यो त ? राज्यले फाटो ल्यायो भनिरहेका विमल गुरूङले जीटीए बनाउँदा के सोचे, पैसा ? चोकी ? विकास ? त्यो कुन कुन जातिगोष्ठीले कति कति पाए?
कोही बेला मोर्चामा राजनीतिक चेतना यस्तो लबस्तरो ढङ्‌गमा आउँछ कि लाग्छ, टाउको उसैले छिनाएर मारेपछि मरौ खर्च प्रदान गर्दै एक मिनटको मौन धारण गरिरहँदा उसले आफूलाई सन्त नै ठान्दा हुन्‌ । कति दिन एक हातमा फूल अर्को हातमा हतियार बोकेर दार्जीलिङमा राजनीति चल्छ ? बढ़ो गाह्रो समय आयो ।
जीटीएले दिएको बाटोमा राज्य सरकार
जीटीएमा कुनै पनि जातगोष्ठीको भाषिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षाको निम्ति ठाउँ राखिएन । जनजातिको मुद्दा, जात गोष्ठीको प्रशासनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सुरक्षाबारे जीटीएमा कुनै विभाग छैन । भन्नलाई त ५८ वटा विभाग छ जीटीएमा । तर रित्तो छ । मानौं, जीटीएका सभासद्हरू दार्जीलिङका जनता हेर्ने गोठालो हुन्‌ । दानापानी मालिकको हातमा । २८ वटा दागोपापका विभाग र ५८ वटा जीटीएका विभागमा के अन्तर छ ? क्षमताको हिसाबले, कार्यप्रणालीको हिसाबले, कार्यान्वयनको हिसाबले, घोटालाको हिसाबले, लुट र ठगीको हिसाबले, ठेकेदारको हिसाबले, पर्सन्टेजको हिसाबले, कति अग्लो छ जीटीए, दागोपापभन्दा ?
मोर्चाका नेताहरूले नै भनिसकेका छन्‌ कि जीटीए दिएर मोर्चालाई राज्य र केन्द्र सरकारले ठगिसकेको हो, तब फेरि किन त्याग्दैनन्‌ त जीटीए ? त्रिपक्षीय सम्झौतामा जीटीएको खेस्रा पढ़ेर बुझ्न सक्ने मानिस हुने हो भने र केन्द्र र राज्यको चलखेल बुझ्न सक्ने बौद्धिक र राजनीतिज्ञ हुने हो भने पहाड़मा जातजातमा गोर्खा विभाजित हुने थिएन । जीटीए हुँदाहुँदै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने थिएन । बोर्ड भनेको विमल गुरूङलाई जवाब पनि हो । किनभने ‘तपाईँको जीटीएमा त्यति क्षमता छैन कि हामीलाई यसले सम्बोधन गरोस्‌,’ भनेको हो बोर्डले । वास्तवमा जीटीए प्रमुखले बोर्डको राजनीतिक भाषा बुझेका छैनन्‌ । अर्थात ‘सुबास घिसिङकै बाटोमा गएर हामीलाई ठग्नुभो, हाम्रो भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक सुरक्षा प्रदान गर्ने क्षमता जीटीएमा छैन, अब हामीले हाम्रैबारे सोच्नुपर्ने भो’ भनेको हो बोर्डले । उनीहरूलाई यसो भन्नुपर्ने स्पेस कसले दिएको हो ? ममता व्यानर्जीले कि विमल गुरूङले ? राज्यले जीटीएमा बनाइराखेको दुलो विमल गुरूङले किन देखेनन्‌ ? किन त्यो दुलोबाट राज्य सरकार छिरिसकेपछि सुर्ता गर्छन्‌?
स्पष्ट छ, विमल गुरूङले खनिदिएको बाटोमा नै हिँड़िरहेको छ राज्य सरकार । अब राज्यले फाटो ल्यायो भन्नुको के अर्थ ?
गोर्खाल्याण्ड र हावा मिठाइ
विमल गुरूङले फेसबुकमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति सबैलाई एकजुट भइदिन आह्वान गरेछन्‌ । फेसबुकमै सबै एकजुट भइरहेका छन्‌ । बाहिर त जनता आआफ्नो मेलोमा लागिसकेका छन्‌ । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, अब गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भनेको कुन पर्सन्टेजको नाम हो, कुन योजनाको नाम हो र कुन सपनाको नाम हो । हातमा दिल्लीलाई हल्लाउने कुनै भरपर्दो हतियार छैन । सांसद एसएस अहलुवालिया दिल्लीमा हाई काड़िरहेका छन्‌ । भाजपालाई दबाब दिने कुनै नीति सार्वजनिक छैन, न त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति प्रेसर छ । सांसदहरूको बहुमत सङ्‌ग्रह गर्ने काम त के, उनीहरूलाई गोर्खाल्याण्डको ‘गो’ पनि बुझाइएको छैन ।
राष्ट्रिय मिडियामा गोर्खाल्याण्डलाई ‘बहस’ बनाउने न त कुनै एजेण्डा छ । न त सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डबीचको तादाम्यता केलाइएको छ, न त गोर्खाल्याण्डको निम्ति कुनै आन्दोलन नै गरिरहेको छ । राज्यले जीटीएमा हस्तक्षेप गर्‍यो कि गोर्खाल्याण्ड गर्‍यो ! अचम्म त के लाग्छ भने मोर्चाका नेताहरूले ‘जनताले के ठान्ला’ भन्ने बेसिक सुर्ता पनि गर्दैनन्‌ । राज्यले जीटीएलाई हस्तक्षेप गर्‍यो भने यसको रिव्यु कमिटी छ, विधायकहरू छन्‌ । दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता छ । राज्यपाल छन्‌ । न्यायपालिका छ । कानुन छ । धेरै बाटो छन्‌, जहॉंबाट छिरेर ‘राज्यले किन हस्तक्षेप गर्छ ?’ भनेर सोध्न सकिन्छ । ‘राज्यले हस्तक्षेप गर्‍यो अब गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छु’ भन्नु त यति हास्यास्पद कुरा हो कि त्यसको गम्भीरतासमेत विमल गुरूङहरूलाई थाहा छैन ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन त तब गरिन्छ, जब जीटीएले भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारीको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर चाल पाइन्छ । त्यतिबेला गरिन्छ कि ‘राज्य र केन्द्रले हामीलाई ‘खसी’ पारेछ, अब यसको जवाब जीटीएको झटारो हानेर दिन्छु’ भन्ने चेतना पलाउँछ । त्यतिबेला गरिन्छ गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन कि जातजातमा विभाजित हुनुको प्रमुख कारण यही ‘जीटीए’ नै रहेछ भनेर बुझिन्छ । त्यतिबेला गरिन्छ गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन कि तेलङ्‌गाना हुनु र गोर्खाल्याण्ड नहुनुमा हाम्रो राजनीतिक बौद्धिकताको दरिद्रताले काम गरेछ भनेर पत्तो पाइन्छ । त्यतिबेला गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरिन्छ कि ‘गोर्खाहरूको मुद्दा दबाउन केन्द्र र राज्यसत्ता जाल थापेर बस्छ अनि त्यहॉं अब हामी पर्नु हुँदैन’ भन्ने ज्ञान पलाउँछ । त्यतिबेला गरिँदैन, जतिबेला राज्यले पैसा कम्ती दिन थाल्छ । त्यतिबेला गरिँदैन, जतिबेला जीटीएमा आउने कोषभन्दा धेर करोड़को विकास योजना मुख्यमन्त्रीले पहाड़लाई दिन्छ । त्यतिबेला गरिँदैन, जतिबेला सम्झौता गरेर पनि विभाग र क्षमता दिँदैन । यसको निम्ति अरू प्रक्रिया छन्‌, समाधानमा जाने । यतिखेर पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छु भन्नु हावा पिट्‌नु मात्र हो । जनतालाई हावा मिठाइ खुवाउनु मात्र हो । भोलि रिव्यु कमिटी बसेर हस्तक्षेप नगर्ने र विभागीय क्षमता बढ़ाउने भयो भने के हुन्छ यो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ?
राजीनामा र गोजीनामा
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्नुअघि जीटीए सरकारलाई फर्काइदिनुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो, ‘यसले गोर्खाहरूको राजनीतिक, अर्थनीतिक, जातिक, सांस्कृतिक सुरक्षा गर्दैन, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहियो ।’ भन्नुपर्‍यो, ‘हामीलाई केवल दार्जीलिङका जनताको लागि मात्र होइन भारतभरिका गोर्खाहरूलाई पहिचान दिलाउने छुट्टै राज्य चाहियो ।’ किनभने गोर्खाल्याण्डमा पुग्ने बाटो जीटीएपछिल्तिर नै छ । गोर्खाल्याण्डको प्रश्नसित विधायकहरूको कुनै सम्बन्ध छैन । विमल गुरूङ आफै भन्छन्‌, ‘छुट्टै राज्य हुनुको निम्ति राज्यको एनओसी चाहिँदैन भन्ने कुरा तेलङ्‌गानाले सावित गरेको छ ।’ फेरि विधायकहरूको राजीनामा किन ? राजीनामा त जीटीएका सभासद्हरूले दिनुपर्ने होइन र ? किनभने सभासद्को सम्बन्ध सोझै गोर्खाल्याण्डसित छ । जीटीएबाहिर नभई गोर्खाल्याण्ड पुग्न सकिन्छ भने कसरी पुग्न सकिन्छ ? खै बहस ? सबैलाई थाहा छ दागोपाप हटाएर नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेको हो । त्यही मोर्चाले फेरि जीटीए हटाएर किन गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दैन ?
अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने कार्यक्रमहरूको घोषणा नगरी, सबै जनताको मत नलिई, दलीय सहमति नबटुली, बौद्धिक कसरत नगरी एक्कासी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको घोषणा हुन्छ । खासमा यो गोजीनामा सङ्‌कट हो । सबैले बुझिसकेका छन्‌ । एउटा हातले राजीनामा लेख्दै र अर्को हातले गोजीनामा लेख्दै गर्दा भविष्य सङ्‌कटको कल्पना गर्नुपर्दैन त ?
70,560 total views, 1 views today
विधायकत्वबाट मात्र होइन पार्टीबाटै राजीनामा दिनसक्छु : दार्जीलिङका विधायक डा. छेत्री The political mess
228,779 total views, 76 views today
258,302 total views, 76 views today
274,532 total views, 76 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 274,547 total views, 76 views today Comments comments
274,547 total views, 76 views today
274,472 total views, 76 views today